Warbixin ka Hadlaysa Dugsiga Hoose/Dhexe ee Gabdhaha Cabdalla Deerow Isaaq (Sawirro) | Daafeet	Sunday, September 25th, 2016	Home
Warbixin ka Hadlaysa Dugsiga Hoose/Dhexe ee Gabdhaha Cabdalla Deerow Isaaq (Sawirro)
Dec 6, 2012 - Aragtiyood	Annagoo ah Maamulka Dugsiga ayaa waxaan rabnaa inaan warbixin buuxda ka bixino Iskuulka.
Iskuulkan waxaa uu ahaa Iskuul hore ee Dowladdii Maxamed Siyaad Bare ay Isticmaali jirtay, waxaana la oran jiray Dusiga Hoose/Dhexe ee Bartamaha oo la burburiyey lagana qaatay wixii muuqday.
Maamulka dugsigan oo si toos ah soo dirayo warbixintan ayaa ka saaray maleeshiyo kala qaybsadey dhulka Iskuulka, anagoo u adeegsanay Xalsiloooni, deganaan iyo aqoonteena iyo Maamulkii markaas haystay Deegaanka Gobolka, ayadoo aan la xiriirnay Hay’adaha Samafalka sida Hay’adda UNICEF waxayan noogu jawaabeen inaan Qaaraan iska aruurino ka dibna aan bilowno Dhisidda Dugsiga iyaduna ay inoo dhamaystiro dhismaha Iskuulka.
Kadib waxaan bilownay inaan ku daadino dhaagaxaan iyo ciiddii lagu dhisi lahaa annagoo u iibinay Dahabkeena iyo qofkii Ganacsi ku jiray inuu u huray hantidiisa Dusiga, taas oo Ilaahey nagu garabgalay.
Haddaba UNICEF waxay naga caawisay dhinaca qalabka Waxbarashada sida Kurasta, Sabuuradaha, Miisaska iyo Jeestada iyo Manhajka kubaxa Dugsiga.
Kadib Dugisga wuxuu furmay 06/06/2004, Dugsigan waxaa loogu talo galay Waxbarashada Gabdhaha oo keliya, gabdhahaas oo da’dooda u dhaxayso 7 sano jir ilaa 18 sano jir. Gabdhahan oo isugu jira Danyer iyo Agoon oo aan iska bixin Karin Qarashaadka Dugsiyada.
Maaddaama aan ugu talo galnay dugsigan inuu ahaado mid lacag la’aan ah waayo waxaa wax ku barta dadka danyerta ah Caruurtooda, iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatada Dagaalada Sokooye iyo abaaraha ku habsaday gobolada Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Gobolada Baay iyo Bakool.
Haddaba waxaa ka shaqeeya Dugsigaan Macallimiin gabdho ah oo tiradoodu ay gaarayso 22 macallin iyo 1 wiil, 4 haween oo nadiifiyaal ah iyo 2 waardiye, tirada ardeyda dhigata Dugsiga waa 940 oo wada gabdho ah oo 370 ay agoomo yiniin.
Haddaba Dugsiga wuxuu ka kooban yahay
1. 10 Fasal
2. 8 Musqulood
5. Berkat Biyo
Sidaas darteed walaalayaal waxaan idin sheegaynaa inaan wax mushaar ah aanan qaadanin, waxaana idinka codsnaynaa dhiiri gelinta macallimiinta iyo dhisidda darbi wareeg ah oo Iskuulka yeesho, dayactirka Dugsiga iyo qalabaynta Xafiiska Dugisga sida Computaro iyo matoor inaad nagu caawisaan.
Waxaad Kala Xiriiri Kartaan
Maamulka Dugsiga Cabdalla Deerow Isaaq
Maano Maxamed Nuur Tishiliini
Tell: 00252615807874 ama 00252695807847
Fadlan Riix hoose hadaad tahay ilbax	WARARKII KU DHAAFAY	Dhegeyso Salaad Cali Jeele: “Madaxweynaha Waqtigiisa Waa Dhamaadey Xow Kursiga Isugu Dhejaa”
Aqri Warqad Kasoo Baxdey Xafiiska Reysulwasaaraha Kuna Socota Wasaaradaha Amniga Iyo Wasaarada Warfaafinta
- Sep 23, 2016	Warqad Qoraal ah oo ka soo baxday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Dolwadda Federaalka Soomaaliya Cumar ...
Daawo Sawir uu Amiin Camir Maanta Ka Sameeyey Arinta Bada
- Sep 23, 2016	Dacwadii bada ee u dhexeysey somaliya iyo kenya ayaa meel fiican mareysa ayadoo maanta ...
Dhegeyso”Gudoomiyaha Baarlamaanka Dowlada Federaalka Somaliya oo ka Hadley Sababta uu u Tegey Magalada Baydhaba
- Sep 23, 2016	Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa sheegay ujeedka uu ku tagay ...